Ejirila Redmi K30i dị ka igwe 5G dị ọnụ ala na ihuenyo 120 Hz | Gam akporosis
Emeela Redmi K30i dị ka ekwentị mkpanaaka 5G dị ọnụ ala na ihuenyo 120 Hz
El Redmi K30i Ọ bụ ọhụrụ adịchaghị ama na esịmde ufọt ufọt nso nke. Ngwaọrụ a emeela ka ọ bụrụ onye ọrụ ọhụụ dịka onye ọhụrụ so n'ezinụlọ Redmi K30, nke ebidola na Disemba afọ gara aga.
Ọnụ a na ndị ike Qualcomm Snapdragon 765G, chipset kụrụ ahịa na njedebe nke 2019 dị ka nhọrọ kachasị mma nke Qualcomm maka igwe ntanetị. Otu n'ime ogige ya kachasị mkpa bụ nke njikọta 5G ọ na-enye. Ọ bụ ya mere ekwentị mkpanaka a nwere ike ijikọ na netwọk a, n'etiti ihe ndị ọzọ anyị na-agbasawanye n'okpuru.
1 Ihe niile banyere Redmi K30i: njirimara na nkọwa
Ihe niile banyere Redmi K30i: njirimara na nkọwa
Ihe ohuru Redmi K30i bu uzo nkpachapu nke mbu nke Redmi K30 5G. Onye na-eme ihe na China ekpebiela iwelata ọnụ ahịa ekwentị ama ama, mana na -achọghị ịchụ àjà dị ukwuu nke atụmatụ Redmi K30 5G na-enye; ihe si na ya pụta bụ ngwaọrụ a anyị na-ekwu maka ya ugbu a.
Na ọkwa nke imepụta na ọdịdị, anyị ahụghị nnukwu esemokwu na nke mbụ Redmi K30 5G. N'ezie, anyị nwere otu ọdịdị ahụ, ya mere o siri ike ịkọwa ọdịiche ha. Nke a pụtara na anyị ga-alaghachi na nhazi ihuenyo zuru oke na obere bezels na igwefoto n'azụ kwụ ọtọ ma tinye ya na okirikiri.
Ihuenyo nke mobile a nwere otu 6.67-inch diagonal na teknụzụ IPS LCD. Ọ na-ejidekwa mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080, yana a 120 Hz ọnụego ume ọhụrụ, ihe na-eju anya na nso a ma bara oke uru mgbe ị na-egwu egwu, ebe ọ na-enyere ndịna-emeputa aka ka ọ pụta ìhè karịa karịa na 60 Hz ọkọlọtọ, nke bụ ndị anyị na-ahụkarị.
N'ihe banyere ike, aha a na-akpọ Snapdragon 765G chipset bụ ọrụ maka inye ike nke Redmi K30i chọrọ ịgba ọsọ na ụdị ngwa na egwuregwu na-enweghị nsogbu ọ bụla. Mgbawa a sitere na Qualcomm jikọtara ya na Adreno 620 GPU, 6GB nke RAM, na 128GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Na nke a, anyị ga-agbakwunye batrị ikike 4,500 mAh nke nwere nkwado maka teknụzụ na-ebu ngwa ngwa 30-watt site na ọdụ USB-C, ihe a na-ahụkarị.
The n'azụ foto ngalaba mejupụtara a 48 MP onye na-agba égbè na-etu ọnụ f / 1.79 oghere, oghere nke abụọ MP nke nwere oghere f / 8 maka foto obosara, igwefoto 2.2 MP na f / 2 na igwefoto MPN 2.4 na f / 2 maka mmetụta nhịahụ ubi. Maka foto ndị dị n'ihu enwere ihe mmetụta 2.2 MP + 20 MP nke dị na oghere yiri pill nke dị na akuku elu nke ihuenyo ahụ.
Site n'iji ojiji nke OLED, Redmi K30i enweghị onye na-agụ akara mkpịsị aka. Nke a, n'aka nke ọzọ, ekwuola usoro biometric n'akụkụ. Ngwaọrụ na-abịa na anwansi niile nke gam akporo 10 n'okpuru MIUI 11; N'ezie, a ga-atụ anya na ọ nwere ike ịkwalite MIUI 12, akwa mkpuchi nke dịbu na gọọmentị ma bụrụ mara ọkwa maka ọkwa Xiaomi na Redmi dị iche iche.
Ekele maka ikpo okwu mkpanaka, Redmi K30i dakọtara na netwọkụ 5G. O nwekwara Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, ihe mmetụta Infrared na NFC maka ịkwụ ụgwọ kọntaktị.
IKIRU 6.67 "FullHD + IPS LCD na 120 Hz ume ọhụrụ
Ndị isi Azụ: Main 48 MP (f / 1.79) + Wide n'akuku nke 8MP (f / 2.2) + Macro nke 2 MP (f / 2.4) + Sensor maka Eserese mode nke 2 MP (f / 2.2). Ugboro abụọ ikanam flash / Ihu: 20 MP + 2 MP
UMUAKA 4.500 mAh na ngwa ngwa 30-watt
OS A gam akporo 10 n'okpuru MIUI 11
Njikọ Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na akụkụ / Ihu ude / USB-C
Mbibi na ibu ibu 165.3 x 76.6 x 8.79 mm na 206 g
Ego a mara ọkwa maka China, ahịa nke a mara ọkwa ya na ya, bụ yuan 1,899, ọnụ ọgụgụ nke ihe dịka euro 245. Amabeghị mgbe ọ ga-ebupụta ụwa niile, mana n'ezie ọnụahịa ya maka ahịa mba ụwa ga-adịtụ elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Emeela Redmi K30i dị ka ekwentị mkpanaaka 5G dị ọnụ ala na ihuenyo 120 Hz
Etu esi anwale isiokwu Google Chrome gbara ọchịchịrị na ọchụchọ iji gam akporo
Ihe aga-eme bu ihe eji emeghe ohuru nke ihe edeputara nke emere site na koodu isi Astrid